Buug-gacmeedka loogu talagalay iPhone 11 Pro Max: Hagaajinta Caan ah | Wararka IPhone
Buug-gacmeedka loogu talagalay iPhone 11 Pro Max: kor u qaadista casriga ah
Waa nooc soo noqnoqda oo sannad walba ku soo noqda xilligan oo kale naqshaddiisa gaarka ah, tayadeeda ugu sarraysa iyo soo bandhigiddeeda aan fiicnayn, sida Twelve South ay ku samayso mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah alaabooyinka ay na siisay muddo toban sano ah, gaar ahaanna wax soo saarka Manzana. . Laakiin sanadkan kiiskan boorsada ee BookBook wuxuu la imanayaa dhowr horumar oo xallinaya laba ka mid ah kuwa ugu waaweyn (waxaan dhihi lahaa oo kaliya) "buts" oo la dhigi karo daboolkan gaarka ah ee naqshadeynta buugga.
Laba iyo toban Koonfurta ayaa cusbooneysiiyay kiiska BookBook ee moodooyinka cusub ee iPhone, laga bilaabo 11 illaa 11 Pro Max, laakiin sidoo kale waa lagu daray xiritaanka magnetka ee daboolka ka ilaalin doona, oo hadda kiiska gudaha ee iPhone-ka si fudud ayaa looga soocay kiiska banaanka iyadoo ay ugu wacan tahay qaar ka mid ah qabatooyinka magnetka. Waxaan ku tijaabinay buuga BookBook-ka iPhone 11 Pro Max waana kuwan aragtideena.
1 Naqshad aan la ogaan karin
2 Jeebka iyo daboolka
Naqshad aan la ogaan karin
Naqshadaynta kiiskan iPhone-ka wuxuu abuuraa jawaabo dhammaan noocyada qofkii arko markii ugu horreysay. Laba iyo tobanka koonfureed wax badan ayey halis ugu jiraan Buuggan laakiin haddii ay soo bandhigeysay qaabkan sanadba sanadka ka dambeeya tan iyo markii ay Apple soo saartay iPhone 4 wax ayey u noqon doontaa, sidoo kale waxay u heli kartaa iPad iyo MacBook. Waxaa lagu heli karaa bunni iyo madow, waxay ku dayanaysaa buugaagtii waagii hore oo ay ku qoran tahay dahabkeeda xarkaha laf dhabarta iyo qaabkeeda gabow. "Buuggan" daboolaya iPhone-kaaga ayaa ku ilaalin doona 360º.
Kiisku wuxuu ka samaysan yahay maqaar tayo sare leh, oo bixiya taabasho aad u fiican, oo dammaanad qaadaya gabow, oo ka fog in uu kiiska kharribo, siin doona taabasho shaqsi ah oo xitaa ka sii qurux badan. Sannadkanna waxaa ku jira xiritaanka birlabta oo ka dhigaysa daboolka hore inuu xirnaado., mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn ee moodelladii hore lahaa.
Buug-gacmeedka ayaa ka kooban laba qaybood: daboolka kore iyo daboolka gudaha oo si iskiis ah isugu dhejisan si magnetic ah, oo u oggolaanaya inay kala baxaan oo ay ku biiraan hal sekan oo keliya. Isku hagaajinta udhaxeysa labada qaybood waa mid amaan ah, waa inaadan ka baqin inay si kadis ah u kala baxaan. Mid ka mid ah faahfaahinta laba iyo tobanka koonfureed ay taxaddar weyn ka muujiyeen ayaa ah sanduuqa gudaha. Waxay ku dhici lahayd qaladka samaynta kiis fudud oo fool xun, sida moodooyinka kale ee suuqa yaal, laakiin taasi maahan astaanta guriga. Qolofta balaastigga ah ee gudaha ayaa dhabarka ku daboolan isla maqaar ahaan inta ka hartay kiiska BookBook, sidaa darteed haddii aad ka soocdo iPhone-kaaga inta ka hartay kiiska, waxaad sii wadi doontaa inaad iPhone ka ilaaliso kiis la mid ah.
Jeebka iyo daboolka
Sinnaba sinaba uma ahan kiis caato ah, taa bedelkeed. Laakiin kiiska Buugga Buuggu ma aha dabool oo keliya, sidoo kale waa boorso qaadi kara afar kaar isla markaana leh meel loogu talagalay biilasha iyo tikidhada. Haddii aan u maleyno inay tahay dabool noo ogolaanaya inaan ka tagno boorsadeena guriga, maaddaama cabirkiisu uusan sidaa u weyneyn. Hadana waqti kasta oo aadan xiiseyneynin inaad xirato dharka oo dhan, ilbiriqsi gudahood ayaad iPhonekaaga u kala saartaa inta hartayna guriga ama gaariga.
Boosaska kaararka waa weyn yihiin oo awood u leh inay dhex galaan oo si fudud uga saaraan, marka laga reebo kan hoose oo aan sidaa u fiicnayn. Ahaanshaha hufan, kan dambe ayaa u keydin lahaa DNI ama kaar aqoonsi kasta oo kale oo ay tahay inaan soo bandhigno iyadoon laga saarin qafiska. Inta ka hartay boosaska wax dhibaato ah kuma lahaan doontid gelinta ama ka saarista kaararka deynta. Waxa kale oo jira jeeb kuu oggolaanaya inaad gelisid biilasha, tigidhada, iwm.
Waxa aan sameyn karin waa inaan dib ugu cusbooneysiino aaladda iyadoo kiiska-qoloftiisu dhan tahay. Waa inaan ka saarnaa iPhone-kiisa kiiskiisa intiisa kale, iyo wixii la mid ah wax dhibaato ah kuma lahaan doonno adeegsiga saldhigga lacag-bixinta wireless-ka ah ee la jaan qaada. Waxaan ku adkeysanayaa, ma ahan dhibaatada ugu yar maxaa yeelay waa dhaq dhaqaaq si dhib yar ku qaadan doona ilbiriqsi. Intaa waxaa sii dheer, muddadii aan tijaabinayay, markii aan guriga imid waxay ahayd dhaqdhaqaaq aan sameeyay isla markii aan soo galay, waxaan uga tagayaa kiiska dibedda irridda, iyo iPhone-ka oo kiiska ku jira jeebkayga.
Ma iloobi karno muuqaal kale oo kiiskan ah: waxaa loo isticmaali karaa istaag ahaan si loo soo bandhigo waxyaabaha ku jira warbaahinta badan. Dhaqdhaqaaq fudud waxaan ku dhejin karnaa iPhone-kaaga booska ugufiican si aan ugu raaxeysano taxanaheena aan jecel nahay, ama xitaa ku ciyaarno buro xakameyn ah oo kuxiran Bluetooth.
Markuu arko buugga Buugga, qofku wuxuu si toos ah u eegaa qaabkiisa gaarka ah, laakiin tani ma qarin karto tayada wanaagsan ee qalabka, ilaalinta weyn ee ay ku siineyso iPhone-kaaga iyo kala-duwanaanta ay leedahay maadaama loo isticmaali karo boorsada kaararka iyo biilasha, iyo istaag ku raaxeysiga waxyaabaha ku jira warbaahinta badan. Sannadkan waxa kale oo ay ku dareysaa xiritaanka magnetic-ka oo sii xiraya, iyo suurtagalnimada kala-goynta labada qaybood ee kiiska daqiiqad labaad iyada oo ay ugu mahadcelineyso magnets-ka ay ku jirto. Way adagtahay in loo helo kiis aad u badan oo qalabkeenna leh tayadan. Tani laga heli karo bunni iyo madow black 69 on Amazon (isku xirka)
Laba qaybood oo si fudud u kala taga
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Buug-gacmeedka loogu talagalay iPhone 11 Pro Max: kor u qaadista casriga ah
Imtixaanka iska caabinta biyaha ee aadka u daran ee iPhone 11
Riwaayadaha cusub ee Philips Hue ayaa yimid Spain